सिईडिबिको आईपीओ बाँडफाँड आज कति बजे हुँदैछ ? तपाईको भागमा १० कित्ता पर्ला ? | Nepal eNews - Nepali Online News Portal
बैशाख ३१, काठमाण्डौ । सिईडिविब हाइड्रोपावरले निश्कासन गरेको आईपीओ बाँडफाँडको मिति तए भएको छ । बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ बिजय लाल श्रेष्ठको अनुसार आज विहान ११ बजे क्यापिटलको कार्यालयमा हुने भएको हो । सेयर बाँडफाँड भएको भर्चुअल माध्यमबाट देखाइने छ । आईपीओ बाँडफाँड भएको समाचार बाहिर आइसकेको थियो ।
बैंशाख १७ गतेदेखि बैंशाख २१ गतेसम्म निश्कासन गरेको आईपीओ १७ लाख ३६ हजार ७०१ जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिएका खरिदकर्ताहरूले २ करोड ६३ लाख ४५ हजार ५२६ कित्ता शेयरका लागि आवेदन दिएको कम्पनीको शेयर जारी तथा बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलले जानकारी दिएको छ । यो सर्वसाधारणलाई जारी भन्दा ११।२४ गुणा बढी आवेदन परेको हो ।
कमपनीले सर्वसाधारणका लागि २५ लाख १८ हजार २३० कित्ता साधारण शेयर जारी गरेको हो । जसमा २ प्रतिशत अर्थात ५० हजार ३६५ कित्ता शेयर कर्मचारीहरूका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख २५ हजार ९११ कित्ता शेयर सामूहिक लगानी कोष र बाँकी २३ लाख ४१ हजार ९५४ कित्ता शेयर सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको छ ।
आईपीओमा मागभन्दा धेरै आवेदन परेकोले न्यूनतम १० कित्ताका दरले गोलाप्रथा विधीबाट बाँडफाँड गरिनेछ ।